Sekoly simban’ny rivodoza : Traboina navelan’i AVA -
AccueilSosialySekoly simban’ny rivodoza : Traboina navelan’i AVA
Sekoly simban’ny rivodoza : Traboina navelan’i AVA
09/01/2018 admintriatra Sosialy 0
Simba ny ankamaroan’ny fotodrafitrasam-pampianarana vokatry ny fandalovan’ny rivodoza AVA. Araka ny tatitra vonjimaika avy tamin’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena, Dren 6, Cisco 19 ahitana sekoly 151 no voakasiky ny fahasimbana. Efitranon-tsekoly miisa 128 kosa no simba tanteraka, raha toa ka, 209 ireo simba amin’ny ampahany. Miisa 130 ireo niala tafo ary 5 kosa ireo mampiantrano traboina. Mahatratra 17 029 ireo ankizy tsy mianatra, raha toa ka roa no namoy ny ainy tany amin’ny Cisco Vangaindrano noho ny fiakaran’ny rano. Isan’ireo nitondra takaitra goavana vokatr’io rivodoza io, ohatra ny lisea Jacques Rabemananjara ao Toamasina izay ahitana mpianatra 4 000 mahery. Miisa 18 ireo efitrano fianarana simba, tafiditra amin’izany ny trano famakiam-boky. Ho an’ny faritra Atsinanana hatrany, dia manodidina ny 45 isan-jato ny sekoly teknika simba araka ny tatitra avy amin’ny minisitera foibe. Nahitana fahasimbany koa ny sekoly teknika any amin’ny faritra Vatovavy Fitovinany, Amoron’i Mania, ny any Sofia vokatry ny fiakaran’ny rano sy ny rivotra nifofo. Manoloana io fahasimbana io anefa, dia tsy nitazam-potsiny ireo minisitera tompon’andraikitra fa efa misy ny fandraisana andraikitra. Ho an’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena izao, dia efa mijery ny ahafahana manarina ireo takaitra navelan’ny rivodoza AVA izy ireo ka anio talata izao no handefa iraka hisantatra ny asa fanamboarana ny minisitera, any amin’ny Cisco Fenerive Atsinanana, Toamasina I, Brickaville, Manakara. Toraka izany koa ny minisiteran’ny Fampananan’asa, fampianarana teknika ary ny fiofanana arakasa, izay handray andraikitra avy hatrany amin’ny fanarenana ireo sekoly nahitana fahasimbana, araka ny fanazavan’ny minisitra Raharimalala Toto Marie Lydia.
Tafakatra 63 000 ireo traboina
Mahakasika ny takaitra navelan’ny rivodoza AVA hatrany, dia fantatra fa tafakatra 6 ireo namoy ny ainy, araka ny tatitra vonjimaika avy tamin’ny BNGRC. Roa tsy hita popoka, 3 naratra, miisa 13 523 indray ireo voatery nafindra toerana, ary maherin’ny 63 000 ireo traboina. Mahakasika ireo lalana nisy fahatapahana kosa indray, dia fantatra fa efa eo ampametrahana ny “pont modulaires” ho an’ny RN7, RN25 ary RN34 ny fitondram-panjakana amin’ny alalan’ny minisiteran’ny Asa vaventy. Efa azo ampiasaina ihany koa ny RN2 nanomboka ny faran’ny herinandro teo. Raha kosa, mbola ao anatin’ny rano tanteraka eo Ambatonapoaka any amin’ny lalam-pirenena RN1. Eo amin’ny lafin’ny fanampiana ireo traboina kosa indray, dia mitohy ny fizarana sakafo sy fitaovana ilaina amin’ny fiainana andavanandro ataon’ny ekipan’ny BNGRC, miaraka amin’ireo mpiara-miombon’antoka toa ny Unicef, OIM. Mbola mitohy manaraka izany ny fanampiana ataon’ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery, ka anjaran’ireo teny Ankaditoho Maroroho indray no nisitraka izany, omaly. Mizotra manaraka izany ihany koa ny tohana ara-tsaina ho an’ireo traboina eto an-drenivohitra ataon’ny minisiteran’ny Mponina. Toraka izany koa ny fanaraha-maso ataon’ny minisiteran’ny Serasera sy ny fifandraisana amin’ny andrim-panjakana, ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena ary ny minisitera misahana ny tetikasan’ny Filoham-pirenena, ny fanajariana ny tany, ary ny fampitaovana ireo fefiloha eto an-drenivohitra sy ireo fahasimbana any amin’ny faritra.
Foana ny filazana loza momba ny AVA
Mahakasika ny rivodoza AVA indray kosa, dia foana avokoa ny filazana loza ho an’ny distrika sy ny faritra voakasik’izany. Omaly 8 janoary tamin’ny 9 ora maraina, tany amin’ny 185km Atsimo Atsinanan’i Taolagnaro no nisy ny foibeny. Mitondra rivotra mahatratra 65 km isan’ora sy tafiotra 90 km isan’ora izy manodidina ny foibeny. Hanohy ny diany hianatsimo manalavitra hatrany an’i Madagasikara izy amin’ny hafainganam-pandeha 15 Km isan’ora, araka ny tatitra avy amin’ny sampana mpamantatra ny toetr’andro. Mbola entanina kosa ireo mpampiasa ranomasina amin’ny morontsiraka Atsimo Atsinanana sy Atsimo mba tsy hiandriaka. Mila fitandremana hatrany koa ny mpanjono amin’ny morontsiraka hafa. Io no filazana farany mikasika ny rivodoza AVA raha tsy misy ny fiovana goavana tampoka, hoy hatrany ny mpamantatra ny toetr’andro.
Fanta-poko, fanta-pirenena ny tian-kantongavan’ny Filoha teo aloha sady filoha nasionalin’ny antoko Tiako i Madagasikara (Tim), Marc Ravalomanana, hatramin’ny niverenany an-tanindrazana. Izy ihany rahateo no nanambara tamin’ny nahatongavany teto Madagasikara, teny amin’ny trano fonenany teny Faravohitra ...Tohiny
Fiatrehana ny fifidianana : Ao ambadiky ny Filoha Rajaonarimampianina ny rehetra
Inde – Madagasikara : Mihamafy ny fiaraha-miasa